Novonoin'i COVID i Ekundo! Aloha mankany amin'ny Liona Afrikana any Waikiki
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Novonoin'i COVID i Ekundo! Aloha mankany amin'ny Liona Afrikana any Waikiki
Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Safety • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
COVID dia namono olona efa ho 5 tapitrisa hatramin'ny nahatongavan'io aretina io tamin'ny fiandohan'ny taona 2020.
Matetika i forgetton no biby maro maty amin'ny COVID. Ny iray dia i Ekundo, liona afrikanina monina ao amin'ny Zoo Honolulu ao Waikiki, ary ankafizin'ny mpitsidika mandritra ny taona maro.
Ny ben'ny tanànan'i Honolulu Rick Blangiardi dia nanambara ny fahafatesan'ny liona lahy 13 taona.
Ny liona dia maty tamin'ny toe-pahasalamana naterany ny alatsinainy lasa teo Zoo Honolulu any Waikiki
Samy naneho famantarana ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony niaraka tamin'ny kohaka ny Ekundu sy ny liona vavy 12 taona, Moxy, ny alatsinainy 4 oktobra 2021.
Ny santionany dia nangonina avy hatrany avy tamin'ny liona roa mba hitsapana ny SARS-CoV-2, ilay virus izay miteraka COVID-19 amin'ny olombelona.
Ekundu, izay efa notsaboina tamin'ny androbe nandritra ny dimy taona mahery, dia nanomboka narary mandra-pahatongany tsy nihinan-kanina intsony. Raha vantany vao tsy nahazo intsony ny fanafody nanohana azy tamin'ny sakafo izy dia nanapa-kevitra ny ekipa mpitsabo biby sy biby fa hanatorana azy hanome fitsaboana toy ny antibiotika, fitsaboana tsiranoka ary fanafody hafa hanampiana azy hahatsapa ho salama kokoa. Mandritra izany fotoana izany dia azo angonina santionany manokana kokoa ho fizahana bebe kokoa ny antony hafa mety mahatonga ny aretin'ny taovam-pisefoany. Ny soritr'aretin'ny taovam-pisefoana ambony nataon'i Ekundu dia voavaha ho valin'ny fitsaboana, saingy nanomboka naneho famantarana ny aretin'ny taovam-pisefoana ambany izy ary sarotra kokoa ny miaina mandritra ny andro vitsivitsy. Na eo aza ny fanaraha-maso isan'andro sy ny fanohizany ny fitsaboana dia nodimandry herinandro i Ekundu taorian'ny nanehoany ny famantarana nataony tamin'ny voalohany.
Noho ny fanandramana natao tany amin'ireo laboratoara amin'ny tanibe, ny valiny izay nanambara fa ny liona roa dia tsara ho an'ny SARS-CoV-2 dia vao nahazo an'i Ekundu taorian'ny nahalasanan'i Ekundu. Eo am-piandrasana rohy COVID, ny mpitsabo ny fiompiana dia nanangana ny fitsaboana sy ny protokol biohazard mifanaraka amin'ny zavatra nataon'ny zoo nahazo fankatoavana AZA hafa ho valin'ny fipoahan'ny SARS-CoV-2 nanerana ny firenena. Zill veterinarian Jill Yoshicedo dia nizara fa "na dia ny ankamaroan'ny aretina SARS-CoV-2 amin'ny saka lehibe tsy an-trano aza dia aretina malemy izay mamaly tsara ny fanampiana azy ireo, i Ekundu dia indrisy, iray amin'ireo tranga vaovao izay toa nampifandraisina tamin'ny COVID pnemonia sy famoizana ain'olona mahatsiravina amin'ireto karazana ireto. ”
The Zoo eo am-piandrasana fitsapana fanamafisana momba ny SARS-CoV-2 amin'izao fotoana izao ary koa ny valin'ny patolojia izay hanampy amin'ny famaritana ny habetsaky ny anjara asan'ny aretina azo tamin'ny fahafatesany. Na dia toa nihena vetivety aza ireo soritr'aretin'i Moxy, dia manara-maso tsara ireo mpiasa ary manohy manome azy ireo fikarakarana sy fitsaboana manohana azy. Ny toetran'i Moxy dia toa marin-toerana ankehitriny ary manaraka ny làlana mankany amin'ny fanarenana tanteraka.
Mbola tsy fantatra ny niavian'ny liona. Ny mpiasa rehetra nifandray akaiky tamin'ny liona dia vita vaksiny ary mifanaraka amin'ny politikan'ny vaksinin'ny mpiasa ao an-tanàna. Nosedraina ihany koa izy ireo ho an'ny COVID-19 ary hita fa ratsy. Ny mpiasan'ny zoo dia manohy mampihatra protokol biohazard henjana mba hisorohana ny fielezan'ny virus amin'ny faritra biby hafa.
Ny talen'ny Zoo Santos dia nanamarika fa: "Midera ireo mpiasan'ny biby sy mpiambina anay izahay noho ny ezaka mafy nataon'izy ireo sy ny fikarakaran'izy ireo an'i Ekundu. Amin'ny maha-liona lahy tokana azy ao amin'ny Zoo Honolulu, Ekundu dia malala sy manan-tantara. Ny fianakaviana zoo dia nalahelo tokoa tamin'ny fahafatesany, ary niara-niasa mba hifantoka hatrany amin'ny fahasalamana sy ny fiadanan'i Moxy, ary ny fikarakarana ireo biby sisa tavela ao amin'ny zoo. ” Nanambara ihany koa i Santos hoe: "Satria afaka miatrika COVID-19 amin'ny olombelona ny biby, dia ampahatsiahivina ny mpiasa fa tokony hiasa tsy tapaka sy tsy tapaka ary hanaraka ny fombafomba hiarovana ny biby. Tianay koa ny hanararaotra izany fotoana izany hampahatsiahivana ny vahiny rehetra mitsidika ny zoo mba hisaron-tava amin'ny faritra biby atahorana zoonotic izay voatondro izay misy primata, saka, alika ary hoofstock. ”
Teraka tamin'ny 2 Novambra 2007 i Ekundu ary tonga tao amin'ny Zoo Honolulu tamin'ny taona 2010. Niaraka tamin'i Moxy vadiny izy ireo dia nanangana zanak'alika liona telo izay nafindra tany amin'ny zoo hafa ho anisan'ny karazan-javaben'ny Association of Zoos and Aquarium (AZA) Drafitra velona. Ny liona afrikana mazàna dia miaina hatramin'ny 15-25 taona amin'ny fahababoana.